Weerar Dad Badan Lagu Dilay oo Ka Dhacay Kaniisad Ku Taalla Mareykanka. – Shabakadda Amiirnuur
Maxaa Cusub, Uncategorized, Wararka Dibadda, Wararka Gudaha
November 6, 2017 6:32 am by admin Views: 101
Wararka ka imanaya Mareykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan 26 Qof ay geeriyootay kaddib markii Nin hubeysan uu weerar ku qaaday kaniisad lagu magacaabo Sutherland ku taalla Gobolka Texas ee Dalkaasi.
Greg Abbott, oo ah Guddoomiyaha gobolkaas ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay dad badan kadib markii nin hubeysan uu toogasho ka billaabay illinka kaniisadda isagoo illaa gudaha hoose usii gudbay, dad badanna ku laayay.
Waa dhimashadii ugu badneyn taariikhda ee gobolka Texas soo marta sida uu sheegay gudoomiyaha. Hay’adda FBI-da ayaa dhankeeda sheegtay in Ninka weerarka qaaday mar dambe la toogtay kadib markii ay is rasaaseeyeen isaga iyo ciidamada Boliska.
Argagax iyo kala carar ayaa ku dhacay bulshada ku dhaqan degmada Sutherland oo qiyaastii 30KM ujirta magaalada San Antonio.
Madaxa amaanka Texas Freeman Martin, ayaa shaaca ka qaaday in dadka dhintay ay da’doodu u dhaxeyso 5-72 jir ku jiray Kaniisadda xilligii uu dhacayay weerarka.
Waxaa uu sheegay in ninka weerarka geystay uu ku jiray da’da labaatanka kaasoo ahaa nin aad u tababaran waayo wuxuu toogashada u geystay hab xirfadeysan oo wuxuu isku soo qariyay wax madow isagoo sidoo kale adeegsanayay qoriga sida darandooriga u dhaca oo la rumeysan yahay inuu sababteeda leeyahay khasaaraha badan.
Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaya in Ninka weerarka geystay lagu magacaabo Devin P Kelley, oo 26, jir ah,laakiin laanta FBI-du wali ma shaacin magaca rasmiga ah ee Ninka weeraray Kaniisadda.
Sikastaba ha ahaato’e, usbuucii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dalkaasi Mareykanka ay ka dheceen labo weerar oo lagu dilay 10 qof oo American ah kuwaasoo ka kala dhacay gobollada Colorada iyo New York oo katirsan dalka Mareykanka.